Omunye abanikezeli carbohydrate umzimba womuntu owenziwe kahle isitashi. Uphulé phansi iguqulwe ibe yi-glucose. Kubalulekile ukugeleza zonke izinqubo emzimbeni. Ngakho-ke kubalulekile ukwazi ukuthi yikuphi ukudla aqukethe isitashi, ngakho qiniseka ukuthi ukuwafaka ekudleni kwakho. Iningi butholakala imifino, izithelo, okusanhlamvu nokuyimidumba. Akukhona ukuthi kumane kuqondane kusukela endulo phakathi kwazo zonke izizwe wale mikhiqizo ziyisisekelo ekudleni. A namaqhawe Russian waqina, ukusuthisa ikakhulu wokudla.
Ukuze zonke izitshalo Starch supply main izakhamzimba. Ngakho-ke, imikhiqizo ukudla Lokudabuka isitshalo iqukathe lolu ketshezi. Iningi kuwukuthi imbewu, izithelo kanye izimpande zezitshalo. Thola ukuthi yini ukudla aqukethe isitashi, kungaqondakala ukuthi imfuyo kufanele kube ku ekudleni kwabo bonke abantu. Phela, kungcono ukudla Kunconywa yibo bonke ochwepheshe yokudla okunempilo. Sekuyisikhathi eside Lokhu ukudla kwaba main ezizweni eziningi.
Ngakho, yini ukudla ube isitashi? Okokuqala, kungcono zonke okusanhlamvu, ikakhulukazi welayisi, ibhali, nokunye okufana nokolweni, ukolo corn. Zemifino amazambane, izaqathe, u-beetroot, futhi zonke imidumba. isitashi Yemvelo - kuyinto kancane izidakamizwa siyagwinyeka ukuthi sinqamukile phansi glucose. Le nqubo iqala umlomo, ukuze kugaywe kangcono, ukudla kufanele kahle baba imilutha ye.
Ukuze ukumuncwa kangcono isitashi Kunconywa ukuba adalule imikhiqizo equkethe, ukwelashwa ukushisa. Nokho, nge ukuvezwa kwesikhathi eside lokushisa eliphezulu Kumiswa therefrom ikhemikhali enobuthi ukuthi kubanga umdlavuza. Akunconyelwe gazinga eside mikhiqizo. Ngokwesibonelo, amazambane athosiwe noma amazambane chips - kakhulu ukudla trudnousvoyaemaya. Ngakho okusanhlamvu noma amazambane kungcono ukupheka, ukubhaka, noma ukudla.
Labo ufuna ukunciphisa umzimba, ukuzama ukuqeda ukudla yakho Ukudla equkethe isitashi. Eqinisweni, abantu abaphila ukuphila umzimba, akudingeki eziningi carbohydrate. Ungakwazi umane ukuthola imikhiqizo eziningi isitashi, futhi zinciphise ukusetshenziswa kwazo. Phela, ukugaya ompofu, futhi ongaphakeme amandla izindleko carbohydrate owengeziwe ngeke zibekwe amafutha.
Nakuba konke kuthiwa ngezingozi ketshezi, ngokuyinhloko ibhekisela nesitashi elicwengiwe. It is etholwe ikakhulukazi amazambane noma corn, usebenzisa phosphate, amakhorali amanxusa kanye defoamers. Kuyinto lokhu powder emhlophe futhi ukubangela ukuqunjelwa kanye iziyaluyalu umzimba.
Yikuphi ukudla aqukethe isitashi wenza eyayenziwe? Konke ukudla okunoshukela, amaswidi, ehla, isinkwa ne-pasta. Yengezwe ukudla zonke okusemathinini, baby ukudla, ayi, ice cream, yogurt ngisho iziphuzo. Ngezinye izikhathi eyayenziwe kugaywe ukuba izinto ezingaphezu kufakwe kalula. Lokhu kubizwa ngokuthi i isitashi ukushintshwa. It isetshenziswa ukudala umkhiqizo iyunifomu, okungcono ukuwaxuba nokwenza kwabantu.
Udinga ukwazi ukuthi yikuphi ukudla aqukethe isitashi, futhi sihlanganise ukudla ngendlela efanele. Ngempela, cishe ngeke kugaywe ebukhoneni nezinye ushukela, amaprotheni noma acid. yokudla Ngakho ezimbi isinkwa ushizi, iphalishi nge jam noma amazambane nge inyama. Kuyinto lezi inhlanganisela bese udala izinkinga kuthiwa ashiwo isitashi.
Dogwood omisiwe: izakhiwo ewusizo kanye contraindications isicelo esithile kanye nokwelashwa
Amaqanda Sezinkomo: izinzuzo futhi efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka, iresiphi sokulungiselela yabo
Sezombangazwe Igor Nikolaevich Rudensky: Biography, imisebenzi kanye amaqiniso athakazelisayo
Kuyini ngemisebe? Igalelo eyaba nalo umzimba womuntu
Inqubomgomo Foreign futhi yasekhaya Svyatoslav Igorevich
Qualitative Odri jacket tando biyela you yesithwathwa ezinzima
Kanjani futhi ngubani kangcono ukugqoka ingubo lace